Tsvangirai to meet Kuffor (AU Chairman) (28-06-07) - The Zimbabwean
Tsvangirai to meet Kuffor (AU Chairman) (28-06-07)
MOVEMENT for Democratic Change (MDC) leader, Morgan Tsvangirai will be holding meetings with President John Kuffor of Ghana soon and CAJ News can reveal that the chairman of the African Union has called the meeting after growing concern over the tense political situation in Zimbabwe.
Tsvangirai is expected to ratchet pressure on Kuffor, who since taking over the AU chair has shown clear disdain and disapproval of President Robert Mugabe’s human rights abuses and political repression.
Highly-placed sources within the main wing of the MDC led by Tsvangirai told CAJ News in confidence that the former trade unionist would use the opportunity to call for censure of Mugabe as well as expose the ineffectiveness of the Mbeki dialogue initiative, which Zanu (PF) is using to buy time and try to strike an unfair deal with the opposition.
“Tsvangirai is going to tell Kuffor that contrary to what Mugabe tries to make the world believe, there is no improvement on the political situation in Zimbabwe and that it now requires resolute action by the AU and the African leaders,” a senior MDC official said.
“Kuffor has also requested that Tsvangirai briefs him on the Mbeki dialogue initiative and the president is going to call a spade a spade especially by exposing the delaying tactics being used by Zanu (PF) as well as Mbeki’s bias in the mediation.
MDC secretary general, Tendai Biti confirmed the visit to Accra, Ghana by Tsvangirai and his team but said details of the meeting could only be revealed after the discussions.
Kuffor is believed to be planning a visit to Harare in the coming month to assess the situation as well as hold discussions with Mugabe, who is increasingly attracting the condemnation of his colleagues in Africa over political repression and refusal to step down from power.
Tsvangirai and other Save Zimbabwe Coalition leaders were recently in the United Kingdom where they held rallies and meetings as part of the international outreach ahead of next year’s elections- CAJ News.